Indawo enoxolo ilungele ukuphumla
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguDougie
Indawo yokuhlala ekumgangatho osezantsi ibandakanya iholo yokungena ekhokelela kwigumbi lokuhlala elamkelekileyo kunye nekhitshi evulekileyo yokutyela, omabini amagumbi aneengcango ezinkulu zepatio ezivumela ukukhanya okuninzi kumagumbi.
Ukusuka kwigumbi lokuhlala uya kunyuka izinyuko ezincinci ukuya apho uya kufumana amagumbi okulala amabini aqaqambileyo kwaye amatsha aneebhedi ezimbini ezingatshatanga kunye nelinye igumbi ibhedi enkulu yenkosi. Kumgangatho ongaphezulu uya kufumana igumbi lokuhlambela losapho elikhulu eliqaqambileyo elineshawa yokuhlambela ngaphezulu.
I-bogan e-Coldingham ngumqolo omhle ozolileyo wezindlu ezixubeneyo kunye nezindlu ezininzi ezizimeleyo kwaye zahlukile zonke ezinomtsalane. I-Treetops ikwisiphelo esiphezulu apho kukho umthi osecaleni kwaye onoxolo. Ukuba uyaluthanda ulwandle lwaseColdingham kuhambo olufutshane nje ukusuka kwindlwana ukuya kwelinye ungaqhuba umgama omfutshane kwaye upake kwindawo yokupaka iimoto ejongene nehotele yasest vedas.
Uthule kakhulu, unoxolo kwaye uyaphumla
Umbuki zindwendwe ngu- Dougie
Ukuba iindwendwe kufuneka zifune naluphi na uncedo okanye isikhokelo zinokuqhagamshelana nomphathi wobumkeli. Darren 07748124869.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Coldingham